၂၁ နှစ် - Porn-ED ED, HOCD နှင့် Vagina Phobia တို့ကိုနှစ်အကြာတွင်ကုသပေးခဲ့ပြီး - Brain On Porn
အသက် ၂၁ - PED သွေးဆောင် ED, HOCD နှင့် Vagina Phobia တို့သည်နှစ်အကြာတွင်ပျောက်ကင်းသွားသည်
ငါနေ့တိုင်းဒီ website တွင်လာနှင့်မျှမတိုးတက်မှုကြည့်ဖို့အသုံးပြုကြောင့်ဤသည်အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်အရေးကြီးပါသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, porn ဖြတ်ထက်ဝက်သာစစ်တိုက်ခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ ဒီပုံပြင်ငါကနဦးသတိမမူသောအခြားအညီအမျှအရေးကြီးသောပြဿနာများကိုသို့ကြည့်ရှုသည်။
လူတိုင်းက 'ငါအဆိုးဆုံးမြင်ကွင်းခဲ့' 'ဟုဆိုသည်။ ငါဟုပြောမည်မဟုတ်သော်လည်းငါ့ကိစ္စတွင်အလွန် poor.I ဖြောင့်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စဉ်းစားနဲ့ကျွန်မ 13 အခါ YouTube ပေါ်မှာတစ်ဦးချင်းစီကတခြားနမ်းမိန်းကလေးများဗီဒီယိုကြည့်ပယ်စတင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်, ထိုအချိန်အားဖြင့်လိင်တူချစ်သူ porn, ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ tranny porn မှသွား ငါ 19 ဖြစ်ခဲ့သည်။ အကြှနျုပျ၏လိင်တံအမျိုးသမီးတွေန်းကျင်ကျမဲ့ပေမယ့်ညစ်ညမ်းန်းကျင်အားကြီးသောဖြစ်ခဲ့သည်။ အခုတော့ 21 မှာငါ 100% မိန်းမနှင့်စိုက်ထူခြင်းနှင့်လိင်ခံစားနိုငျရ။
ငါလိင်တူချစ်သူအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မစဉ်းစားခဲ့ဘူး, သေး 17 အသုံးပြုပုံငါသာ '' Shemale '' porn မှစိုက်ထူရနိုင်သောကွောငျ့ကြှနျတေျာ့အတှေ့အကွုံကြောက်ခမန်းလိလိဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ 18 တုန်းကကျွန်မတယောက်အစောင့်အကြပ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဒါငါကညာကြောင့်ငါလိင်ရှိသည်ဖို့အပူတပြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ traumatising နှင့်ရှက်စရာကြီးနှင့်6လအတွင်းကြာမြင့်ရာကလျမီဒီရာနှင့်တစ်ဦးကို HIV ခြောကျလှနျ့ရတဲ့အထိအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာငါ porn နုတ်ထွက်ကြောင်းကိုကျော်ရရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဤအချိန်လောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါကစောင့်ကြည့်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့် 90 ရက်ပေါင်းအနည်းငယ်သာတိုးတက်မှုခံစားခဲ့ရပြီးနောက်။ ငါနေဆဲသာတကယ်လိင်တူချစ်သူနှင့် shemale porn မှစိုက်ထူရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ငါ (ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး 1 သို့မဟုတ်2ကလူ) ကိုပြောသည်လူတိုင်း့လိင်တူချစ်သူတယောက်သို့ဖွစျသညျကိုနိဂုံးသို့ရောက်ကြ၏။ သို့သော်လည်းငါသည်နက်ရှိုင်းချငါအမျိုးသမီးတွေခစျြတျောမူသောငါ၏နှလုံး၌သိတယ်: ပေမယ့်သူတို့ကိုငါမှစိုက်ထူမရနိုင်ခြင်းနှင့်ထိပ်ပေါ်မှာငါယောနိ၏ဤ phobia ရှိခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ၂၀၁၄ မေလအထိကျွန်တော်စိတ်ဓာတ်ကျတာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတယ်။ မနက်ကနေညအထိနေ့တိုင်းနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ တစ်ကြိမ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသေကြောင်းကြံစည်ဖို့စဉ်းစားခဲ့တယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်ကြိုးစားခဲ့ပါက (မည်မျှပင်လှပပါစေ) ကျွန်ုပ်သည်မယုံနိုင်လောက်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုရရှိလိမ့်မည်။ ငါလိင်ကိုရှောင်ကြဉ်၏။ ငါဖြတ်သန်းသွားတဲ့ယောက်ျားလေးတိုင်းငါသူတို့ကိုငါစွဲမက်မနေလားဆိုတာစမ်းကြည့်တယ်။ ငါစိတ်နဲ့အရာအားလုံးကိုစမ်းသပ်ပြီးအရာရာတိုင်းကိုသံသယဝင်ခဲ့တယ်။ ငါလိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာမသိခဲ့ဘူး၊ ငါစိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တယ်၊ လိင်အင်္ဂါနဲ့လိင်အင်္ဂါတွေလိင်အင်္ဂါဖြတ်တောက်တယ်၊ လိင်စိတ်နည်းတယ်၊ ငါစိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုသုံးပြီးလှည့်ဖျားရန်ကြိုးစားတိုင်းငါထနိုင်ခဲသည်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်အင်္ဂါမှေးမှိန်ခြင်းကိုကျော်လွှားရန်အရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ငါဓာတ်ပုံတွေသုံးပြီးတဖြည်းဖြည်းထိတွေ့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ငါကိုသာငါ့ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ပိုဆိုးစေ၏။ ငါ 'ရငျးနှီး' နားမလည်သို့မဟုတ်မပျော်ခဲ့ပါ
ငါစာသားငါ့အလိုရှိသမျှပြဿနာတွေနဲ့ငါရှောက်သွားပေမယ့်သူတို့ကအရေးအပါဆုံးဖြစ်သကဲ့သို့အစားငါဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အကြံဥာဏ်အကြောင်းပြောဆိုကြလိမ့်မည်ခရီးအကြောင်းကိုတစ်ခုလုံးကိုစာအုပ်ရေးဖို့နိုင်ဘူး။ အခုတော့ငါကအမြိုးသမီးမြားကိုစဉ်းစားသို့မဟုတ်ငါ 100% စိုက်ထူရမယ့်မိန်းမနှင့်ဖြစ်ကြောင်းကိုအခါ။ ငါ3အဓိကပြဿနာတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဖြေရှင်းချက်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: ပြဿနာ 1 ငါတို့အားလုံးကိုမှီဝဲသောတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပြဿနာ 1: Porn သွေးဆောင် ED
၁ ။ လူတိုင်းမတူကြတာကြောင့်သင်ဘယ်လောက်ကြာကြာရပ်ရမလဲဆိုတာအတိအကျသိဖို့ခက်ပေမယ့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြည့်ရတာရပ်တန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ဟာလက်တစ်ဆုပ်စာအကြိမ်တွေ (နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ ၁၅-၂၀ ကြိမ်ဖြစ်နိုင်တယ်) ။ သို့သော်ထိုအချိန်အများစုအတွက်ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသောနေရာအနီးသို့မသွားခဲ့ပါ။ ဒါဟာငါ့အသက်ကိုထဲကဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်စကြည့်သည့်အချိန်နှင့်မည်မျှကြည့်သည်ကိုအရေးမကြီးပါ။ သင့်အနေဖြင့်ရပ်တန့်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏ကိစ္စမည်မျှပင်မျှော်လင့်ထားပါစေ IT တိုးတက်လာလိမ့်မည်။
၂။ သင်ညစ်ညမ်းနေသောရက်အရေအတွက်ကိုမရေတွက်ပါနှင့်။ ငါဒီအမှားလုပ်မိခဲ့တယ် အဲဒါအသုံးဝင်မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါဟာမင်းရဲ့ထာဝရဘ ၀ ထဲကထာဝရဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံပြီးဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောသူဖြစ်ပါကသင် porn မှထွက်ခွာသွားသည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းအတော်လေးစွဲလမ်းမှုဖြစ်လာလိမ့်မည်။ သို့သော်ထိုသို့ပြုလုပ်လျှင်သင် porn ကိုစဉ်းစားနေသည်။ အဲဒီအစား၊ ငါ့စိတ်ထဲမှာဒီလိုလုပ်ခြင်းကပိုပြီးကျန်းမာတယ်။ စာတစ်စောင်ရေးပါ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြေငြာပါ၊ ညစ်ညမ်းမှုသည်သင်၏ဘဝမှဖြစ်သည်၊ သင်ဤစာကိုနှစ်နှစ်အတွင်းဖွင့်သောအခါသင်နှစ် ဦး ထဲ၌ညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုကျင့်မည်မဟုတ်ပါ။ စာရေးသားပြီးကတည်းကနှစ်ပေါင်း။ စာတစ်စောင်ကိုတစ်နေရာရာမှာနေရာချပြီး PORN အကြောင်းမေ့လိုက်ပါ။ အချိန်ကာလတစ်ခုကြာပြီးနောက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံသည်သင်၏စိတ်တွင်မကြာခဏစဉ်းစားမိလာလိမ့်မည်။ ငါအများကြီးစဉ်းစားလေ့ရှိတယ်။ ယခုငါမကျင့်။
၁) ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းသည်ခက်ခဲသော်လည်းအရေးကြီးသည်။ ကြာရှည်စွာညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုရှောင်ပြီးနောက် 'ပြားချပ်ချပ်' ၌သင်ရှိနေနိုင်သည်။ ငါသေချာပေါက်ရှည်လျားသောကာလအဘို့ကိုပြု၏။ ငါနောက်ဆုံးတော့ flatline ကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုထွက်ပေါက်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့်အချိန်ဖြုန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကိုယုံချင်ယုံမယုံဘူး၊ အစပိုင်းမှာတော့ငါဟာမိန်းကလေးတွေနဲ့အချိန်ဖြုန်းတာကိုမနှစ်သက်ခဲ့ဘူး။ ငါလိင်ချင်တယ်။ သင်၏ကိုယ်ကျင့်တရားမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ၊ porn သည်သင့်ကိုထိုသို့ပြုစေပြီး၊ မိန်းမသည်သင့်ကိုကွဲပြားခြားနားစွာကြည့်ရှုစေလိမ့်မည်။ ငါငြီးငွေ့, မိန်းကလေးများနှင့်အတူပေါင်းသင်းကြဘူး ... ငါ Wee ကောင်လေးကကတည်းကမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါရငျးနှီးမှုကိုနားမလည်ခဲ့ဘူး။ ထိုအခါငါအမြဲတမ်းတူခံစားမိမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ အခုလား။ ကိုယ်ကြိုက်တယ်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ထွက်စာကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာဖြတ်ကျော်ပြီးနောက်နောက်အဆင့်သို့သင်သွားလိုသည်ဟုခံစားရပြီးမိန်းကလေးများနှင့်ပေါင်းသင်းရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတင်းဖိအားပေးပြီးခဏကြာလျှင်သင် ပို၍ ပျော်မွေ့လာလိမ့်မည်။ သူတို့ကိုသင်ပိုနားလည်လာမည်၊ ပိုနားလည်လာမည်။ ဒါကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားကိုပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့သောအခါသူမ (လိင်တံမထွန်းကားနိုင်သော်လည်း) ကသူမကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲမက်ဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်းငါသည်သူမ၏စိတ်ခံစားမှုဆွဲဆောင်မှုကိုရှာဖွေသင်ယူခဲ့တယ်။ ငါနောက်ဆုံးမှာ rewired ။ စိုက်ထူခြင်းမပြုမီသင်တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာပြန်လည်ဆက်သွယ်မှုကိုလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ ငါ ၉ လကြာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုဖြတ်ချင်တယ်၊ ပြီးတော့သူစိမ်းတစ်ယောက်နဲ့တစ်ညအိပ်ချင်တယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ဒီလိုမျိုးအလုပ်မလုပ်ပါဘူး ငါကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ပျက်ကွက်ခဲ့သည် အဲဒီအစားငါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုရှိသူ၊ နောက်ဆုံးမှာစိတ်လှုပ်ရှားမှုရပြီးနောက်ပိုင်းမှာလိင်ဆက်ဆံနိုင်တဲ့သူနဲ့ရင်းနှီးလာတယ်။
၂။ အာရုံငါးပါးကိုအာရုံစိုက်ပါ။ ရေချိုးပါ။ လိမ္မော်သီးဖျော်ရည်ကိုယူပါ။ ရေချိုးနေစဉ်သင်၏အာရုံငါးပါးဖြစ်သောအာရုံ၊ အနံ့၊ ထိတွေ့မှု၊ အရသာနှင့်ကြားနိုင်မှုတို့ကိုအာရုံစိုက်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်ကြားနိုင်သည့်အရာအပေါ်အမှန်အာရုံစိုက်ပါ။ အကယ်၍ သင်ရေဒီယိုကိုကြားနိုင်သော်လည်းထပ်မံနားထောင်နိုင်သည် - ဝေးလံသောကားများအပြင်ဘက်ရှိလေများ၊ လေများသို့မဟုတ်မိုးရေများကြားနိုင်ပါသလား။ မင်းရဲ့လိမ္မော်သီးဖျော်ရည်အမျိုးအစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းရဲ့အချိန်ကိုယူပါ၊ သင်၏ခေါင်းလျှော်ရည်ကိုအနံ့ခံပါ - သင်ဘာထဲတွင်အနံ့ခံနိုင်မည်နည်း။ အဲဒီမှာအုန်းသီးလား၊ လာဗင်ဒါဒါမှမဟုတ်ဘာရှိသလဲ။ သင်သည်အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံသည့်အခါဤအရာကိုသင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ စိတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါ။ အာရုံခံစားမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပြီးဖြစ်ပျက်နေသောသဘာဝဖြစ်စဉ်ကိုသင်၏စိတ်ကမနှောက်ယှက်ပါစေနှင့်။
၃။ 'ဖယောင်းနှင့်ဆုတ်' ကိုစမ်းပါ။ ဖယောင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ခြင်းသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်လုပ်ရမည့်အရာမှာဤအရာသည်သင်၏လိင်တံကိုစိုက်ထူပါ၊ ထို့နောက်၎င်းကိုမအောင်မြင်ပါစေ၊ သင့်လိင်တံကိုထပ်မံစိုက်ထူပြီး၎င်းကိုပြန်လည်မတည်ငြိမ်စေရန် ထပ်မံ၍ ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပါ။ သင်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုသာ သုံး၍ သင်၏အာရုံငါးခုကိုအာရုံစိုက်ပါ။ သင်သည်လိင်ကိစ္စကိုကြာရှည်စွာရှောင်ကျဉ်နေသည့် အချိန်မှစ၍ အမျိုးသမီးများနှင့်စိုက်ထူရန်ရုန်းကန်နေရမှသာဤအရာကိုလုပ်ဆောင်ပါ။
၄။ မိန်းကလေးများနှင့်မိတ်ဖွဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ဓာတ်ကျပြီးတက္ကသိုလ်မှတစ်နှစ်သင်ယူခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော် TGI သောကြာနေ့မှာအလုပ်တစ်ခုရခဲ့ပြီးသူငယ်ချင်းတော်တော်များများရခဲ့တယ်။ တချို့ဆိုရင်မိန်းကလေးတွေပါ။ ငါမိန်းကလေးများနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းပျော်မွေ့စတင်ခဲ့သည် - ငါနှစ်များတွင်ဘယ်တော့မှမတစ်ခုခု။ ငါမိန်းကလေးများအားဖြင့်အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုအထီးမဲရတယ်။ မညစ်ပတ်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဲဒီမှာထွက် Get နှင့် rewire !!
ပြဿနာ 2: HOCD
၁။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လိင်အကြောင်းစိတ်ပူမိသည်။ ငါလိင်တူချစ်သူ porn ကိုခံစားပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိင်တူချစ်သူမစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး ငါ၌အလွန်ပြင်းထန်သော HOCD ရှိခဲ့ဖူးပြီး၊ ငါဘယ်လိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပြီလဲ ကျွန်ုပ်၏လိင်မှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ပူပန်သည့်အခါတိုင်းဤဂါထာကိုထပ်ခါတလဲလဲပြောခဲ့သည်။ 'ယောက်ျားတွေကိုမင်းရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကညစ်ညမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ မင်းဒီအကြောင်းကိုစိတ်မပူပါနဲ့၊ စိတ်ကူးယဉ်နေသမျှကာလပတ်လုံးမကောင်းတာဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး '' ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့မှစိတ်ကူးယဉ်မိမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါ homophobic ကြောင့်မဟုတ် အခုငါ့ရဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုကဘာလဲဆိုတာမင်းမေးကြည့်ရင်ငါ့အဖြေကငါမသိဘူး၊ ဂရုမစိုက်ဘူး။ ငါစီးဆင်းမှုနှင့်အတူသွားပါ ငါမိန်းမများသို့မဟုတ်ယောက်ျားဆွဲဆောင်မှုရှာတွေ့ဖြစ်စေမစိုးရိမ်ပါဘူး။ ကျားမဆီလျှော်သည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ လူအချို့ကလိင်ကိစ္စကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်ဟုပြောလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာများသည်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာနိုင်သည်။ သို့သော်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း။ သင် porn ကိုမကြည့်နေသရွေ့၎င်းသည်သင့်ကိုမထိခိုက်စေပါ။ ငါသိသမျှငါအမျိုးသမီးတွေကိုချစ်တယ်။ လိင်တူချင်းကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုအနှောက်အယှက်မဖြစ်စေပါ။ ငါက porn fetish ကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ, ရိုးရိုးဖြစ်လိမ့်မယ်။ ငါဂရုမစိုက်ဘူး porn မကြည့်ပါနဲ့!
ပြဿနာ 2: လိင်အင်္ဂါ phobia
၁) ဒါကပုံမှန်မဟုတ်ပါ ၎င်းသည်သင်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီအဖြစ်အပျက်ကကျွန်တော့်အတွက်ဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်နေသူတစ်ယောက်တည်းမှာပဲပြproblemနာရှိနေနိုင်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ယောနိ phobia သည်ကျွန်ုပ်၏ HOCD နှင့်ဆက်နွယ်နေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ မိန်းမကိုယ်ခန္ဓာကိုမှားယွင်းစွာကြည့်မိသည် - ကျွန်ုပ်သည်လိင်အင်္ဂါမပါသောလိင်အင်္ဂါကဲ့သို့လိင်အင်္ဂါကိုအာရုံစိုက်နေသည်။ ဖြေရှင်းနည်းကရိုးရှင်းပါတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုနောက်ကွယ်ကနေယူပြီးခန္တကိုယ်ပုံစံနဲ့ယူခဲ့ရတယ်။ ဒါကဘိုးဘေးတွေဒီလိုကြောက်ရွံ့မှုကိုနည်းစေတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်အကြိမ်ကြိမ်လိင်အင်္ဂါကိုကျွန်ုပ်ကြောက်ရွံ့မှုလျော့နည်းလာသည်။
porn Quit နှင့်မိန်းကလေးများအတူ rewire နှင့်သင်ဤကျော်လွှားပါလိမ့်မယ်။ ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းနဲ့ကျွန်မနေဆဲနေ့တိုင်းတိုးတက်အောင်နေပါတယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်ယခုပုံမှန်ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိသည်နှင့်လိင်ရှိနိုင်ပါသည်။6months ago မဖြစ်နိုင်သလိုပဲသော။ ငါ့ကိုမဆိုမေးခွန်းများမေးရန်အခမဲ့ခံစားရသည်။
Glasgow, Scotland မှအသက် 21,
LINK - Read ဖြစ်ရမည်: Porn သွေးဆောင် ED / HOCD / Phobia နောက်ဆုံးတော့နှစ်အကြာတွင်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ